शक्तिशाली परमेश्वोर – Shalom Nepal
Posted on June 21, 2020 June 21, 2020 Author Shalom Nepal	Comment(0)
शालोम नेपाल – जब ब्रिटिश संगीतकार जर्ज फ्रिडरिक हन्डलले आफ्नो सबैभन्दा प्रख्यात वक्ताकोलागि रचना गरिरहेका थिए, उनले आफ्नो अनुहार टेबुलमुनि लुकाए र उनको शरीर थरथर काँपिरहेको थियो । उसको त्यो अवस्था सोच्नु भन्दा पहिले यो लेखिएको खोल्नुहोस्: “ऊ घृणित थियो, र हामीले उसलाई केहि मोलको गनेनौ” (यशैया ५३:३)।
हाम्रो जीवनमा येशू ख्रीष्टले राख्नुभएको मूल्यले हन्डेलको मुटुमा एक तीरलेझैं हान्यो। क्रूसको त्यो पीडा उहाँले सहनुभयो, किनकि उहाँ हाम्रो प्राणको ख्याल राख्नुहुन्छ। यसले हन्डलको आत्माको जग नै हल्लायो, ​​र यस कारणले गर्दा, उनले सबैभन्दा महान संगीत रचनालाई कलम गर्न सक्षम भए, जसलाई हन्डलको शक्तिशाली परमेश्वोर भनेर चिनिन्छ।
म विश्वास गर्दछु कि सबैजनाले शक्तिशाली परमेश्वोरसँग व्यक्तिगत भेट गर्नुपर्दछ। पेन्टेकोस्टको दिनमा, छुटकाराको कथा सुनेपछि ३,००० भन्दा बढी मानिसहरू चर्चमा थपियो। तिनीहरू केवल सन्देश सुनेर सन्तुष्ट थिएनन्, तिनीहरूले शक्तिशाली परमेश्वोरलाई भेट्नुपर्‍यो। जर्ज फ्रिडरिक हन्डललाई गाउनको लागि केवल अर्को संगीत सामग्रीको साथको मात्र आवश्यक थिएन, उनले पनि शक्तिशाली परमेश्वोरलाई भेट्नुपर्‍यो।
त्यसैले हामी अहिले यस संसारले देखेको सबैभन्दा ठूलो आत्मिक जागृतिको चुनौती पूर्ण अवस्थामा छौं। हाम्रो चर्चहरूमा झुण्डिएका धार्मिक प्रतीकहरूले अचानक नयाँ अर्थ लिनेछ। आज व्यक्तिहरू केवल सन्देश सुनेर मात्र सन्तुष्ट हुँदैनन् … उनीहरू शक्तिशाली परमेश्वोरलाई भेट्न चाहन्छन्। के यो तपाईको मनको चाहना हो?
यो कुरा सुनेर तिनीहरूको हृदय छियाछिया भयो, अनि पत्रुस र अरू प्रेरितहरूलाई तिनीहरूले भने, “ए भाइ हो, हामीले के गर्ने?” प्रेरित २:३७
आफ्नो शरीरबाट ढुंगाको हृदयलाई हटाउनुहोस ।
Posted on June 25, 2020 June 25, 2020 Author Shalom Nepal
शालोम नेपाल – परमेश्वरको वचन अनुसार, हामी पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुनुपर्दछ। मैले यस परिवर्तनको बारेमा चार्ल्स स्पर्जनको निष्कर्ष एकदम स्पष्ट र गहिराइमा पाएँ। यो ध्यान दिनुहोस् कि परमेश्वरले हाम्रो हृदयलाई पुन: निर्माण गर्ने वा हाम्रो टुक्रिएको हृदयलाई सुधार्ने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्न। त्यो प्रतिज्ञा यो हो कि उहाँले हामीलाई नयाँ हृदय र सही आत्मा दिनुहुनेछ। मानव हृदय […]
के आनलाइनबाटै प्रभु भोज दिनु उचित हो ?
के यति मन मानिसबाट आशा राख्नु नि धेरै हो र?